आईपीएल मिनी अक्सन : सन्दिपलाई किन्न सक्ने टिम | KhelNepal
आईपीएल मिनी अक्सन : सन्दिपलाई किन्न सक्ने टिम
१४ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग ( आईपीएल ) ३ सिजनको यात्रालाई विश्राम दिने क्रममा गत आईपिएलको उपविजेता टोलि दिल्ली क्यापिटल्सले नेपाली लेग-स्पिनर सन्दिप लामिछानेलाई रिलिज गर्यो। उनलाई २०१८ को सिजनमा दिल्लीले २० लाख भारतीय रुपैयाँमा अक्सनमार्फत ३ सिजनको सम्झौतामा टिममा भित्र्याएको थियो। सम्झौता समाप्त भए पश्चात् उनलाई दिल्लीले रिलिज गर्ने निर्णय गरेको हो।
रिलिज भएका सन्दिपलाई फेब्रुअरी १८ तारिखमा ( बिहिबार ) चेन्नईमा हुने आईपीएलको मिनी अक्सनबाट विभिन्न टोलीहरुले बोलि लगाएर टिममा भित्र्याउन सक्छन्।
अक्सन नजिकिदै गर्दा सन्दिपलाई कुन टिमले आवद्ध गर्ला या उनि बिक्रि नहुने हुन् कि भन्ने कौतुहलता संगै डर नेपाली समर्थकहरुमा रहेको छ। मिनी अक्सन हुनाले टिमहरुसंग विदेशी खेलाडी भित्राउन निश्चित स्थान मात्र खालि हुँदा सन्दिप यो पटक आईपीएलमा आबद्ध हुने नहुने डर छ।
आईपीएल अक्सनमा यो पटक टिमहरुसंग विदेशी खेलाडी खेलाडी किन्नको लागि निश्चित स्थान मात्रै खालि रहेको छ। सहभागी टिमले अधिकतम २५ जना खेलाडी टिममा राख्न पाउछ जसमा अधिकतम ८ जना विदेशी खेलाडीको लागि ठाउँ रहन्छ।
मिनी अक्सनमा विदेशी खेलाडीको लागि सबैभन्दा धेरै ठाउँ खाली भएको टिम किंग्स-११ पन्जाब हो जसले ५ जना विदेशी खेलाडी किन्न पाउनेछ। मुम्बईले ४ जना, दिल्ली, बैंगलोर र राजस्थानले समान ३ जना, हैदरावाद र चेन्नाईले समान १ जना, कोलकाताले २ जना विदेशी खेलाडी किन्न पाउनेछ।
यस लेखमा सन्दिप लामिछानेलाई भित्र्याउन सक्ने २ वटा आईपीएल टिमको विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छौँ।
१. मुम्बई इन्डियन्स ( पर्समा भएको रकम : १५.३५ करोड , विदेशी खेलाडीको लागि खाली स्थान : ४ )
आईपिएलको सर्वाधिक सफल टोलि मुम्बई इन्डियन्सले नेपाली लेग-स्पिनर सन्दिप लामिछानेलाई भित्र्याउन सक्छ। पछिल्लो सिजन हरेक खेलमा ३ फास्ट बलर लिएर खेलेको मुम्बईले यो सिजनको आईपिएल भारतमा आयोजना हुन लागेकोले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्नसक्छ। मुम्बईले आफ्नो ४ जना विदेशी बलरहरु (लासिथ मालिंगा, न्याथन कुल्टर-नाइल, जेम्स प्याटीन्सन, मिचेल मेक्लिंगन) लाई रिलिज गरेको कारण मुम्बईले अक्सनमा जानुअघि बलरहरुलाई प्राथमिकता दिने निश्चित छ।
डिफेन्डिंग च्याम्पियन समेत रहेको मुम्बईसँग स्पिनरको रुपमा राहुल चहार, अनुकुल रोय, जयन्त यादव र क्रुनाल पान्ड्या रहेका छन्। लेग-स्पिनर चाहरले पछिल्लो सिजन सबै खेल खेलेका थिए जुन क्रममा १५ खेलमा ७.४६ को इकोनोमी रेटमा १५ विकेट लिएका थिए।
क्रुनाल र चाहरको जोडी मुम्बईले प्रयोग गर्दै आएता पनि गत सिजन यो जोडीले ८.११ रन प्रतिओभर खर्चेको थियो जुन लिगमा सबैभन्दा महँगो हो। त्यसैले राम्रो स्पिनर ल्याउने बारे मुम्बई सोचीरहेको छ।
मुम्बईले सन्दिपलाई चाहरको ब्याक अपको रुपमा पनि टिममा सामेल गर्नसक्छ। २ सिजन अगाडी मुम्बईले श्रीलंकाका स्पिनर अकिला धनन्जयलाई भित्र्याएको थियो जसको प्रदर्शन खास रहेको थिएन। विश्वभरका अधिकांश फ़्रेन्चाइज टि-ट्वान्टी लिग खेलेका सन्दिपको अनुभवले पनि मुम्बईको रुची बढाउन सक्छ।
अक्सनमा मुजिब उर रहमान (मुजिब महँगो सावित हुनसक्छन्) जस्ता स्पिनर रहेता पनि मुम्बई एक खेलाडीमा मोटो रकम खर्च गर्ने अवस्थामा छैन। मुम्बईसंग खरिद गर्न १५.३५ करोड भारु मात्र रहेको कारण ४० लाख भारु मूल्य राखेका सन्दिपलाई समाबेश गर्नु उपयुक्त बिकल्प पनि हुनेछ।
सन्दिपलाई २०१८ आईपीएल अक्सनमा २० लाख भारतीय रुपैयाँमा दिल्लीले लिएको थियो
२. पन्जाब किंग्स ( पर्समा भएको रकम :: ५३.२ करोड , विदेशी खेलाडीको लागि खाली स्थान : ५ )
केएल राहुल कप्तानीको किंग्स ११ पन्जाबले गत सिजन सुरुवाती ६ खेल हारेता पनि प्रतियोगितामा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो जस बाबजुद टिम प्ले-अफमा पुग्न असमर्थ रहेको थियो। ग्लेन म्याक्स्वेल, मुजिब उर रहमान जस्ता ठुला नामहरुलाई रिलिज गरेको पन्जाबसँग अक्सनको लागि सर्वाधिक ५३.२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध रहनेछ। पछिल्लो सिजन हरेक खेलको अन्तिम-११ मा खेलाडी परिवर्तन गरेको पन्जाब यसपटक भने उचित रणनीति साथ अक्सनामा बस्नेछ।
पछिल्लो सिजन मात्र २ खेल खेलेका मुजिब उर रहमानलाई पन्जाबले रिलिज गरेको कारण पन्जाबसँग स्पिनरको रुपमा रवि बिश्नोई र मुरुगन अश्विन मात्र रहेका छन्। पछिल्लो सिजननै आईपिएलमा डेब्यु गरेका २० वर्षीय युवा लेग-स्पिनर रवीले सबै खेल (१४ खेल) खेल्ने क्रममा ७.३७ को इकोनोमी रेटमा १२ विकेट लिएका थिए। यस्तै, २०१६ देखि आईपिएलमा सहभागी जनाउदै आएका आश्विनले भने पछिल्लो सिजन ९ खेलमा १० विकेट लिएका थिए। हालसम्म लिगमा मात्र ३१ खेल खेलेका आश्विनले पहिलो रोजाइको स्पिनरको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सकेका छैनन्।
२ युवा लेग-स्पिनर रहेका कारण टिमले नेपाली लेग-स्पिनर सन्दिप लामिछानेलाई भित्र्याउन सक्छ। सुरुवाती र डेथ ओभरमा निकै महँगो सावित हुनु पन्जाब बलरहरुको पछिल्लो सिजन कमजोर पक्ष रहेको थियो। सन्दिप पावरप्लेको ओभरमा बलिंग सुरु गर्न सक्षम छन् भने किफायती बलिंग पनि गर्नेगर्छन्।
अक्सनमा सन्दिप बाहेक अन्य स्थापित लेग-स्पिनर उपलब्ध नहुदाँ पन्जाबले उनलाई बोलि लगाउन सक्छ। त्यसकारण टिमसँग मोटो रकम उपलब्ध रहेको र टिममा विदेशी बलरको रुपमा क्रिस जोर्डन मात्र रहेको कारण पन्जाबले सन्दिपमाथि इच्छा देखाउन सक्छ।
टिमहरुसंग विदेशी खेलाडीको लागि थोरै स्थान मात्र खालिरहेको हुँदा यो सिजन अक्सनमा सन्दिपलाई नकिन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ जसलाई सन्दिप लामिछाने स्वयमले पनि स्वीकारेका छन्। बिग ब्यास लिगमा प्रदर्शन औशत रहनुले पनि सन्दिपलाई मुस्किल हुनसक्छ। तर आईपीएलकै अनुभव तथा विदेशी लिगमा लगातार प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली स्पिनरलाई टिमहरुले बेवास्ता भने गर्नेछैन।
सन्दिपले १३ औं सिजनको आईपिएलमा पुरा सिजन बेन्चमै बिताउनु परेको थियो। टिममा रभीचन्द्रन आश्विन, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा जस्ता स्पिनर हुनु तथा विदेशी खेलाडीहरु कागीसो रबाडा, मार्कस स्टोइनिस, शिमरन हेटमायर, एनरिक् नोर्कियाले लगातार मौका पाउनुले सन्दिपलाई अन्तिम-११ मा पर्न रोकेको थियो।
आईपीएल २०१८ र २०१९ मा सन्दिपले कुल ९ खेल खेल्ने क्रममा १३ विकेट आफ्नो नाम गरिसकेका छन् जुन क्रममा ८.३४ प्रति ओभर रन खर्चेका छन् भने २२.४६ को औशत र १६.१५ को स्ट्राइक रेटले विकेट लिएका छन्। भर्खरै सम्पन्न बिग ब्यास लिगमा सन्दिपले होबार्टको प्रतिनिधित्व गर्दै कुल ८ खेलमा ८ विकेटनै लिएका थिए।
२०७७ फाल्गुन ५, बुधबार मा प्रकाशित